सहकारी लक्षित अनलाइन सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीका विविध पक्षबारे प्लानेट अर्थ साेलुसनका सिइअाेसँगकेा कुराकानी-Setoghar
सहकारी लक्षित अनलाइन सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीका विविध पक्षबारे प्लानेट अर्थ साेलुसनका सिइअाेसँगकेा कुराकानी
तपाईं सहकारीलाई नै लक्षित गरेर सफ्टवेयर निर्माण क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभएको हो ?
पहिले म आफैं पनि सहकारीमा नै रहेर काम गरेको थिएँ । त्यहाँ काम गर्दागर्दै प्रविधिको माध्यमबाट सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने सोच आयो । त्यसैकारण म यस सहकारीको निम्ति आवश्यक प्रवधि निर्माणको क्षेत्रमा संलग्न भएको हुँ । मैले जुन सहकारी संस्थामा रहेर काम गरिरहेको थिएँ, साथै मैले जुन सफ्टवेयर चलाउँदै आएको थिएँ । त्यही कम्पनी अर्थात प्लानेट अर्थ सोलुसनमा नै जोडिएर मैले प्रविधिको समेत काम गर्ने मौका मिल्यो ।
कृष्ण जी महर्जन, सिइअाे, प्लानेट अर्थ साेलुसन (सहकारी डट कम)
प्लानेट अर्थ सोलुसनको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न ?
प्लानेट अर्थ सोलुसन विशुद्ध सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेको कम्पनी हो । यस कम्पनीले विगत ११ बर्ष देखि सहकारीहरुमा बैंकिङ सोलुसनको काम गर्दै आइरहेको छ । यस कम्पनीले समय र प्रविधिलाई राम्रोसँग बुझेको छ । हाल नेपालका पूर्व देखि पश्चिम सम्मका ३ सय भन्दा बढी सहकारीहरुले यसै कम्पनीबाट उत्पादित सफ्टवेयरबाट काम गर्दैै आएका छन् । हाल यस कम्पनीले CAS, Lotus Banking, Everest CBS, mPlanet, Mobile Banking, SMS Banking तथा अन्य सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यस कम्पनीका उद्धेश्यहरुबारे पनि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
सहकारी र प्रविधिको माध्यमबाट समग्र सहकारी एवं सहकारीहरुका सदस्यहरुलाई धेरै भन्दा धेरै सुविधा दिने नै हाम्रो मुख्य उद्धेश्य हो । प्रविधिलाई छोडेर जनतालाई सुसुचित गर्ने काम सम्भव छैन । यसैकारण सहकारी सचेतना विस्तारको निम्ति समेत उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ भन्ने देखेको कारण यस प्लानेट अर्थ सोलुसनले आफ्ना सबै सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका सहकारीहरुमा सचेतना बिस्तारका थप कार्यक्रमहरु समेत लिएर जाने योजना बनाएको छ ।
सचेतना भन्नाले के भन्न खोज्नुभएको हो ?
सचेतना भनेको नेपाल सरकार तथा अन्य विभिन्न सेवा प्रदायकहरुले दिँदै आएका विभिन्न सुविधाहरुलाई कसरी जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने किसिमले प्रविधिसँग जोडेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य हो । ताकि यस्तो सचेतनाले उपभोक्ताको समयको बचत हुन सकोस् । साथै आर्थिक लाभ समेत लिन सकियोस् ।
प्राविधिक कामहरु तपाईं आफैंले नै हेरिरहनुभएको छ कि ?
म आफु चाहिँ व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँ । त्यसैकारण कम्पनीका व्यवस्थापकीय कामहरु मैले गर्दै आएको छु । अन्य प्राविधिक कामहरु कर्मचारीहरुबाट सिष्टमेटिक रुपमा हुँदै आएका छन् । हाल यस कम्पनीमा २१ जना कर्मचारीहरु आवद्ध हुनुहुन्छ ।
यस व्यवसायका मुख्य समस्या र चुनौतीहरु के हुन् ?
CBS मा जतिसुकै उच्च क्षमतायुक्त कर्मचारी भएपनि कामको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न कम्तीमा १ बर्ष लाग्छ । राम्रो क्षमतावान् कर्मचारीहरुलाई भने हामीले पनि राम्रो तलब सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । साथै नेपाली सहकारी सफ्टवेयर बजारमा सहकारीको महत्व बुझेकाहरुको पनि कमी नै छ । त्यसैले सफ्टवेयरको मूल्य र महत्व बुझ्दै प्रोडक्ट सेल्स गर्दा लगानी धेरै नै महँगो पर्न जान्छ । विक्री पछिको सेवाको लागि महँगोमा कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ । पछिल्लो समय सफ्टवेयर कम्पनीहरुबीच भएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको कारण मूल्यमा पनि निकै नै गिरावट आएको छ । मूल्यमा एकरुपता छैन । अहिले फ्रिल्यान्सर भन्दै अफिसमा काम गर्दागर्दै पनि अतिरिक्त कमाई गर्न सकिने लोभमा कम्पनी प्रति प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने कर्मचारी पाउन पनि गाह्रो छ ।
तपाई त एक युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, सेवा विस्तारको क्रममा के–कस्ता कुराहरुमा विचार पुर्याउनुपर्दो रहेछ ?
नेपालको लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र नयाँ क्षेत्र हो । अहिले यस क्षेत्रमा युवाहरुको वाहुल्यता छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । हामीले सहकारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । जुनसुकै प्रडक्ट बनाउँदा पनि कस्टमाइजेसनका धेरै कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अहिले इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्डमा प्रडक्ट डिजाइन गरि त्यसको बजारीकरणको निम्ति सहकारीसँगको व्यावसायिक सम्पर्कको साथै आफ्नो वस्तु तथा सेवालाई विक्रीपछि प्रदान गरिने सेवामा समेत प्रतिवद्ध हुनुपर्ने जरुरी छ । यसो हुन नसके बजारमा अहिले बजारमा अन्य सफ्टवेयर कम्पनीहरुका समेत प्रशस्तै प्रडक्टहरु भएको कारण आफ्नो प्रडक्ट अर्कै कम्पनीको प्रडक्टले रिप्लेस गरिदिन्छ ।
यस प्रविधिलाई बजारीकरण गर्ने क्रममा मुनाफा कस्तो रहन्छ ?
अहिलेको CBS सेल्स र रोयल्टीले त आम्दानी र खर्च उस्तै उस्तै हुन आउँछ । अब केही थप सेवा पनि हाम्रा अहिलेका सेवाग्राहीहरुलाई प्रदान गर्ने सोचमा हामी छौं । त्यसबाट भने थप केही फाइदा हुन्छ भन्ने आशामा हामी छौं । अब हाम्रो नयाँ प्रडक्ट सहकारी डट कम (सहकारी संस्था-वित्त कम्पनी र बैंकलाई लक्षित मोबाइल बैंकिङ एप्स) लाई हामीले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसार गर्दैछौं ।
यसबाट नेपाल अधिराज्यभर सहकारीमा खाता हुनेहरुले बिना कुनै झण्झट आफ्नो खाताको रकमबाट मोबाइल फोन रिचार्ज गर्न सक्नेछन् । यसैगरी टेलिभिजन, इन्टरनेट, ल्याण्डलाइन फोन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायतको बिल समेत तिर्न सक्नेछन् भने डोमेष्टिक फ्लाइटको लागि टिकट बुकिङ तथा डोमेष्टिक बसको समेट टिकट बुकिङ गर्ने व्यवस्था समेत हामीले गर्न लागेका छैं । यसैगरी हाम्रो उक्त सेवाबाट रकम ट्रान्सफर समेत गर्न सकिनेछ ।
नेपाल सरकारले भविष्यमा अनलाइन पेमेन्टको स्विकृति दिएको खण्डमा हामीले त्यो सेवा पनि सहकारी एप्समा थप्ने नै छौं । त्यसैले PES डिजिटल नेपालका लागि ‘सहकारी डट कम’ प्रोग्रामलाई देशव्यापी अभियानको रुपमा लैजानै तयारी हामीले गर्दैछौं । सकिन्छ भने नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर त्यसो हुन नसके आफैंले नै यो चेतनामूलक अभियानलाई पूरा गर्न प्रयाश गर्नेछौं । हेरौं, समय र परिस्थितिले कति साथ दिन्छ ।
हामी डिजिटल नेपालको लागि सहकारी डट कम अभियान सफल बन्यो र राम्रो नतिजा आयो भने हाम्रो दायरा अझ बढेर जानेछ । हामीलाई PES मा १–२ बर्ष भित्र नै कम्तीमा १ सय जना जति सक्षम र अनुभवी सूचना प्रविधिमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरुको खाँचो पर्छ र भविष्यमा यो क्रम बढ्दै जानेछ ।
बजारमा हाम्रो यो प्रडक्ट अन्य कम्पनीले उपलब्ध गराउने सेवाको हिसाबले कुन किसिमले पृथक छ ?
यो नेपालकै पहिलो सहकारी मोबाइल बैंकिङ एप्लिकेसन हो । जुन एप्लिकेसनबाट सदस्यहरुले कुनै क्यास लोड नगरी सिधै मोबाइल रिचार्ज तथा बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
आफ्नो सेवा ग्राहकहरुले रुचाउनुहुनेछ भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
मोबाइल बैंकिङ सुविधाबाट सहकारी संस्थाहरु, सहकारीका सदस्यहरु र PES सबैले बार्षिक आम्दानी पनि गर्ने अवस्था छ । यी सबै सर्भर सेन्सरबाट प्रदान गर्ने छुटबाट नै आउने छ । यसबाट एकातिर समयको समेत बचत हुनेछ भने अर्को तिर आर्थिक रुपमा आम्दानीको स्रोत समेत बन्नेछ ।
यी प्रविधिहरु नेपालको निम्ति आवश्यकता बनेकै हुन् त ?
नेपालमा विजुली, खानेपानी लगायतका अन्य सुविधाको लागि यस्ता प्रविधिहरु आवश्यकता नै बनेका छन् । यस्ता प्रविधिको विकास नहुँदै यस्ता सानातिना कामको लागि पनि लामो समय लगाएर निकै टाढाको दूरीमा लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । अब सहकारी डट कम एप्लिकेसनले यस्ता झण्झटहरु दूर गर्नेछ ।
अबका दिनमा थप सम्भावना के रहन्छ ?
नेपाल सरकारले विस्तारै सबै विभागहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै लैजाने कुरा मैले सुनेको छु । त्यसै अनुरुप मैले तराई क्षेत्रमा भ्रमण गर्दा पनि धेरैजसो ठाउँहरुमा विद्युत काउन्टरहरु अनलाईन भइसकेको पाएको छु । अधिकांश निजी कम्पनीहरु अनलाईन प्रविधिमा नै गइसकेका छन् । विस्तारै खानेपानी पनि अनलाईन प्रविधिमा आउँदैछ । मैले बुझेअनुसार अहिले प्रतिघर कम्तीमा एउटा स्मार्ट फोनको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । त्यसै कारण अब नेपालमा पनि मोबाइलको माध्यमबाट हामी जस्ता प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरुले दिन सक्ने सबै सुविधा दिनुपर्छ र सफल पनि हुन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सहकारीले डिजिटल नेपाल निर्माणको उद्धेश्यमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्नेछन् भन्नेमा म आशावादी छु ।
अन्त्यमा यहाँले भन्नैपर्ने बाँकी कुराहरु केही छन् कि ?
नेपालको दिगो विकासको लागि सहकारी पनि अपरिहार्य छ । खाता भएका जनता मध्ये बरु बैंकमा खाता नभएका नेपाली जनताहरु धेरै होलान्, तर सहकारीमा खाता नभएका नेपालीहरु निकै कम छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारी नै डिजिटल नेपाल निर्माणको निम्ति महत्वपूर्ण प्लेटफर्म बन्न सक्छ । यसैकारण हामीले बर्षौ लगाएर यस प्रविधिको निर्माण गरेका छौं । आशा छ यस प्रविधिलाई सबै जनताहरुले साथ दिइ हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ ।
मंगल ग्रहमा पठाईने अन्तरिक्ष यात्री महिला हुने : नासा
नारामा मात्र सीमित नहोस् उपभोक्ता दिवस
अब चोरिएका मोबाईल स्वत बन्द हुने